Dawladnimaddu waa Dugsi inoo Wada Adeegga ! | Somaliland.Org
Dawladnimaddu waa Dugsi inoo Wada Adeegga !
August 31, 2012	Muxaafid yo Mucaarid waa faraqa keliyaata ee shacab ku kala suntanyahay, marka dowladnimo iyo nidaamkeedda laga hadlaayo. Waa wax qabad iyo tartan xora oo ummadda loogu raadinaayo horumar, nidaam hufan iyo barwaaqo lagaga guuro Jahliga,Gaajadda, Cadaalad daradda, sinnaan la,aanta iyo Midnimo xumadda keenta burburka iyo basan baaska maanta Qaaradda Afrika sidda weyn uga jirta, taasi oo Nin, koox, qabiil ama Urur dan gaara lahi uu isku dayo mijo xaabinta iyo burburinta Dalka, dadka iyo dowladnimadda sidda wadda-jirkaa loo wadda dugsanaayo.
Ninka ama kooxda qaylinaysaa waxay la qaylinaysaa ma dhabaa mise waa dhalanteed? Xaqiiqdu waxay tahay sax iyo khaladba wey noqon kartaa, laakiin sidda ay u badantahay xaajaddu ama sawaxanka baxayaa xaqiidda kuma wadda qotomo, ee nin ama koox Siyaasaddu intay xabaaraysay oo xaska beerka saaray ayaa dagaal iyo dam dam ummadda kula dhex wareegaaya. Siyaasadda iyo hadafkeeddu waxuu yahay marka aniga iyo saaxiibkay aad si wadda jira nooga dhaadhiciso ujeedadda iyo nidaamka saxdaa ee aan u baahanahay in hadba kii jira aan ku bedelayno, ee aan xajiinta iyo xumaha xanbaarsanayn, isla markaasina inagga wadda qoslinaaya oo aan ceeb lahayn.
Shaki kuma jiro in Siyaasiga iyo Urur Siyaasadeedku shacabka ku tiirsanyahay, oo kalsoonidda iyo taageeradda Ummadda Bari ilaa Galbeed markasta tahay in uu ku guulaysto. Siyaasigu maxuu wax ku doonayaa, ama uu wax ku saxayaa haddii bartilmaameedkiisa iyo hal ku dhigiisu yahay Qabyaalad, Nacayb, Beelaysi iyo Dagaal bakhaaniyey oo lagu suntay aflagaado iyo kala furfuris shacabka reer Somaliland ee walaalahaa. Siyaasadda marka aan ka hadlayno iyo habdhaqanka Siyaasiga maanta, ummaddu waxay si weyn u daalacanaysaa qalbiga iyo quluubta ninka Siyaasigaa ee ummadda maanta martidda uga ah codkoodda iyo kalsoonidoodda, si uu u gaadho hogaanka Jamhuuriyadda Somaliland oo uu xaq u leeyahay in uu ummadda hogaamiyo, isagana la hogaamiyo.
Waxaa jira rag Siyaasiyiinna oo aad u qiimo badan oo doorkoodda siyaasiggii yahay mid bisil, oo aad laysugu halayn karo, markay tahay dhinaca hogaaminta iyo kartidda rabaanigaa ee ilahay qofka u dhaliyey, aynu isha ku yara nasino ragga safka hore ee maanta loolanka iyo abaabulka ugu jirka Hogaanka Jamhuuriyadda Somaliland, oo qiimayno hadalkoodda iyo heerkoodda Siyaasigaa ardaa iyo goleba. Ragaasi waxaan leeyahay siddee ayaad kefedda iyo miisaanka u saartaa hadalkaagga iyo qudbadaha aad ka jeediso madalaha kala duwan ee Bulshaddu ku kulanto, gaar ahaan kuwa ayidsan ee taageeradda u haya nidaamkaagga Siyaasiggaa? Nidaam nooceeya ayaad u martaa dhaliisha iyo saxidda Xukumadda hadba jirta oo loo baahanyahay sifo xalaala in khaladaadkeedda loo sheego, hadiiba ay jiraan. Waxaa muuqanaysa in maalin kasta nin Siyaasiyii Golxob isku dooxaayo, oo Siyaasadiisa iyo kalsoonidda shacabku u hayaa xagal daac iyo diisitaan weyni ku imanaayo shaqsiyadiisa, qalbiga ummaddu haddii uu dhaawacmo, habka aad wax u doonaysaa noqdo mid baal marsan dumuquraadiyadda iyo walaaltinimadda guud, waxii kale ee looga gudbaa waxay noqonaysaa bakhti iyo waxaan biri taaban oo bilic iyo basar aan midna lahayn, isla markaasina qofku waxuu noqonayaa mid hawlahiisa Siyaasiggii ay ka baaqsadaan caalaminimo iyo beelo-daajisnimo weyn oo gundhig iyo seesba ay u tahay Qarannimo iyo wadaniyad saliga u wadda fidisa shacabka reer Somaliland, meel kasta oo uu ku suganyahay.
Hadaba ninka ummadda wax ka doonaaya ee hadana sidda toonta u kala dhilayaa waa nin aan habeen jirin, oo Siyaasadda u haysta inay ku rinto hadaf beelaysan iyo hoos u wadda hadal aan maro huwanayn, oo berito yaala suuqa iyo sayladda Siyaasadda.
Rag aad u badan oo Siyaasiyiinna ayaa jira oo doorkoodda Siyaasadeed aan aad ula dhacsanahay, laakiin iska qiira heesa mararka qaarkood, oo qaarkood ardaagoodda markay joogaan si xag jirnimaa oo xaqiiqda iyo siyaasadda ka fog wax u adorosaan, isla markiiba hadana warkooddu uu yaalo bulshadda dhexdeedda. Siyaasadda ninkii aflagaadeeyaa ma geyo ee gurigiisa hayska fadhiyo, waayo Siyaasiyoow waxii adiga iyo aniga ina kala kaxaynaya ee faraq iyo hayb inoo kala samaynayaa hal haboon maha, mana aha midda aad ku gaadhi karto hadafkaagga iyo halka kuu qoondaysan ee khayrkaa hayaanka ku yahay ama ilaahay ku guuleeyeyba qaarkood. Dowladnimaddu waa dugsi inoo wadda adeegga, ee aan u walaalowno, oo u saaxiibno, oo u wadda muslino idilkeenba si maalinba ninkeeddu usha ugu qaado Maandeeq. Midna waa dardaaran waxaa Qarankan lagu talbiisey oo lagu nuuradeeyey dhiiggii iyo dhiicaankii halyeyo aad u badan oo aan wadda ognahay oo uu ugu yaryahay arday maalin shucuurtiisa ku muujiyey inuu socod ku maro faras magaalaha, isagoo diidan waxa la diido idilkeedba.
Waa ayaandaro iyo garasho jaan in nin aan shacabka balaadhan ee reer Somaliland toban qof ka soo helaynin in qayladiisa iyo cabaarayntiisa laga fadhiyo waayo. Nayshii waxay tidhi (sidi-sididaadda mooyaane dhul u dhacaagga hubso), nin saan cadaaliinna waxuu yidhi ( a man has to get know his limits).
Previous PostBeel shaacisay Murashax u tartami doona Golaha deegaanka HargeysaNext PostDahabshiil Group oo loo Qiray in Kaalinta ugu Ballaadhan ka Qaatay Hirgelinta Carwadii Hay’adaha	Blog